Dawladda oo Dib u Eegeysa Xaaladda Ammaan ee Dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda oo Dib u Eegeysa Xaaladda Ammaan ee Dalka
La daabacay måndag 12 december 2011 kl 09.43
Dawladda ayaa dib u eegid ku sameeynaysa falalka la xiriira jaajuusidda, argagixisnimada iyo wixii la mid ah ee wax u dhimi kara xaaladda ammaan ee dalka guud ahaan. Xeerarka maanta jira ayaan ku habooneyn waaqiciga, sida ay sheegtay Beatrice Ask, ahna wasiirka cadaaladda ee dalkan Iswiidhen.
- Khatarta maanta ma ahan oo keliya mid la xiriirta cabsi laga qabo weerar ciidan, waxay noqon kartaa fal argagixisnmo iyo carqalado loo geeysto goobaha muhiimka ah ee bulshada, sida ay sheegtay Beatrice Ask.
Xeerarka haga ammaanka dalka ayaa markii ugu dambeeysay is-bedel lagu sameeyey 15 sannadood hortood, kuwaasina oo sal-dhig uu u ahaa cabsi laga qabey weerar ciidan ee dalka lagu soo qaado.
Halka caqabadda ugu ballaaran ee maanta laga cabsi qabaa tahay, sida ay sheegtay hayadda nabadsugidda ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno Säpo weerar dalkan kala soo gudboonaada ee la xiriira dhanka aaladda elektroonikada ee lagu qaado ilaha muhiimka u ah bulshada.